Nivaha ny Gidragidra Diplaomatika teo amin’i Serbia sy i Makedonia, Tsy Hisy ny Ady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2017 9:32 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, srpski, русский, English
voaloham-pejy amin'ny gazety makedoniana iray mivoaka isan'andro Sloboden Pečat nandritra ny krizy ara-diplaomatika teo amin'i Serbia sy Makedonia. 22 Aogositra 22 (ankavia): “izany hoe mba mila mitsikilo azy ireo indray mandeha isika!” 23 Aogositra (afovoany): “Valian'i Skopje am-pitoniana ny fihantsian'i Belgrade: Rahalahy Serba, tia anareo izahay!”; 24 Aogositra (ankavanana): “Nifampiresaka antelefonina i Vučić sy i Zaev: Hanangana fifandraisana finamanana isika ary hitari-dresaka momba ny fahasamihafana.”
Roa andro taorian'ny nanombohany dia hita ho nitsahatra ny gidragidra ara-diplaomatika teo amin'i Serbia sy i Makedonia.
Nigedraka ny fifanenjanana taorian'ny antso an-telefonina teo amin'ny praiminisitra Makedoniana Zoran Zaev sy ny filoha Serba Aleksandar Vučić izay namoaka fanambarana iraisaina hiroso amin'ny famahana ny tsi-fifankahazoana amin'ny alalan'ny fifampiresahana. Nanambara ny fiverenan'ny mpiasany tsikelikely ho ao amin'ny ambasady ao Skopje i Serbia.
Ny pejy voalohany amin'ny gazety serba mpanohana ny governemanta kosa izay nitabataba “Ady!” sady nanakiana ny Makedoniana ho “nandefona ivoho,” dia somary nihena firehidrehitra aloha, ary avy eo dia nanadino tanteraka ilay raharaha. Ao amin'ny media sosialy, saika nitovy avokoa ny setriny avy amin'ny mpisera manerana ny faritra, izay anehoan'ny olom-pirenena ny fahatafintohinany manoloana ny fiteny lian'ady.
Ny zava-dehibe aloha dia samy NANDA amin'ny fidirana ao amin'ny gidragidra ny vahoakan'i Serbia sy Makedonial!
Na isika na ny Serba dia samy nampiasa ny rantsa-tanany hampita hafatra (retweeting) sy hanjohy ny hafa tao anatin'ny roa andro izao. Ny tiako lazaina dia tsy misy ny afa-mampitambatra anao tahaka ny adala iraisana!
Ny olom-pirenena manerana ny faritra dia samy nidera ilay gazety makedoniana mivoaka isan'andro “Slobodon Pecat” noho ny valiny nataony tamin'ireo fitenin'ny gazety serba tia manaitaitra lian'ady. Tamin'ny 23 Aogositra dia nasehony teo amin'ny voaloham-pejy ireo lohatenin-gazety anti-Makedoniana nampiarahany tamin'ny lohateny lehibe amin'ny teny serba manao hoe “Rahalahy Serba, tia anareo izahay!” nosoratana tamin'ny endritsoratra Sirilika Makedoniana.
Izany no tokony ho setriny amin'ireo gazety mpanaitaitra te-handrangitra. Mankahala anay ianareo? Tia anareo izahay ry rahalahy serba
Maro ireo mpisera Twitter no nanohy tamin'ny fanesoana ireo mpandranitra ady, sady manasongadina ny fitoviana eo amin'ny fitondrana mpandrendri-bahoaka an'i Vučić sy ny praiminisitra Makedoniana teo aloha Gruevski (2006-2017).
Tafakatra teo amin'ny laharana fahatelo amin'ny lisitry ny fahavalo lehibe indrindra amin'ny Serba ny Makedoniana.
Aorian'ny promaja sy ireo Rôma,
alohan'ny Kroaty sy ny savony.
Ny fitaovam-piadiako amin'ny Serba dia ny rakija mavo sy ny henan'ondry. N an-dry zareo indray dia afa-mitondra kaymak sy tatavian-kisoa ry zareo. HIady ao anatin'izany ady izany ao anatin'ny telo andro aho.
Nisy Serba mpisera Twiter iray niteny tsipalotra ny hetsika ‘Revolisiona Maroloko’ izay nanampy tamin'ny fandrodanana ny fitondrana tsirefesimandidy tao Macedonia:
Izany eo ihany ry Makedoniana, fa mbola manana ambin-doko ve ianareo? Mila mandoko alohan'ny Taombaovao manko izahay.
‘Mikatona ny raharaha’ — mbola lavitra an!
Nanjary nampivoaka vaovao fanampiny tamin'ny toe-draharaha miompana amin'ny nahitana an'i Goran Živaljević, mpiasan'ny fitsikilovana serba, tao amin'ny Parlemanta Makedoniana nandritra ny fanafihan'ny ‘Alakamisy mihoson-dra’ tamin'ny 27 Avrily nanaovany selfie koa ity krizy diplaomatika ity.
Nandritra ny antsafa TV tamin'ny 22 Aogositra tao amin'ny Radio Televizionan'i Serbia (RTS), dia nanambara ny Filoha Serba Vučić fa hita teo ny mpitsikilon-dry zareo izay nahazoana alalana avy amin'ny manampahefana mpanatanteraka ambony indrindra ao Makedonia. Na izany aza dia nilaza ny VMRO-DPMNE, antoko nitondra tamin'izany fotoana izany tao Makedonia ny fitsipahany izany filazana izany ary milaza fa tsy nilaza ny marina i Vučić.
Tsy nisy azo ny telefonin'ny manampahefana ambony rehetra tao amin'ny governemanta nandritra io fanafihana tao amin'ny Parlemanta efa nomanina io. NANONTANY i Živaljević ary nahazo alalana avy amin'ny manampahefana mpanatanteraka hiditra. Oviana marina ary avy amin'iza?
Ny ampitso, namoaka ny fanambaran'i Živaljević tenany mihitsy ny RTS izay nilaza fa nahazo alalana hanatrika teo avy amin'ny mpanolotsaina ara-piarovan'ny filoha Makedoniana Gjorge Ivanov. Nahazo ny toerany noho ny VMRO-DPMNE i Ivanov ary mitazona mivantana ny fifehezana ny Sampam-Pitsikilovana.
Namoaka fanambarana fitsipahana azy manokana avy eo ny kabinetran'i Ivanov, nilaza fa tsy nangataka alalana ilay Serba mpitsikilo fa niantso azy ireo taty aoriana mba hanaovana alibi [fiarovantena ara-pitsarana]. Ary nosoritan-dry zareo avy eo fa “nikatona ny raharaha Atoa. Živaljević sy ny fijanonany tsy nahazoana alalana tao amin'ny Parlemanta taorian'ny fifanarahana teo amin'ny servis roa tonta,” saingy toa hita fa tsy mbola nikatona izany raharaha izany.
Raha marina izany dia tafiditra ao anaty fanonganam-panjakana sy famadihan-tanindrazana ny Praiminisitra Dimitriev, ny minisitry ny raharaham-bahiny Poposki, ar ny filoha Ivanov sy ny mpanolotsainany R
Nihanitombo tao ho ao ny antso hanaovana ny famotorana amin'ny endriny rehetra ity ‘Alakamisy Mihoson-drà’ ity. Mitaky ny olompirenena ny hanaovana famotorana izay mety hiampangana ireo manampahefana ambony ho namadika tanindrazana na/sy ny fanesorana azy ireo amin'ny asany noho ny fifandraisany amin'n sampam-pitsikilovana vahiny nandritra io alina io izay saika nivadihan'i Makedonia ho any amin'ny ady an-trano.